Sheekada Filimka Baadshaho: Action Wacan, Bandhig Heer Sare Ah Iyo Dhac Si Sare Loo Sameeyay – Filimside.net
Sheekada Filimka Baadshaho: Action Wacan, Bandhig Heer Sare Ah Iyo Dhac Si Sare Loo Sameeyay
Waxaa maanta tiyaatarada la saaray filimka weyn Baadshaho ee Super Star Ajay Devgn hogaamiye ka yahay sidoo kalena ah filim jilaayaal fara badan la isugu keenay sidoo kalena xambaarsan fariin dhac ku saabsan keedkii ugu weynaa Hindiya xiligii la dhacay 70-maadkii.
Waana xiligii dowlada Hindiya soo rogtay marxadlii kala guurka ee hanti badan oo dowlada shaqsiyaad kala wareegtay.
Jilaayaasha Baadshaho: Ajay Devgn, Ileana D’Cruz, Emraan Hashmi, Esha Gupta, Sanjay Mishra, Vidyut Jammwal
Muxuu Ku Wanaagsan Baadshaho: Ajay Devgn iyo Emraan Hashmi is fahankooda, Action heer sare ah iyo qaabka dhaca loo geesanayo iyo qayaanooyinka badan ee filimkaan ku jiraan
Muxuu Ku Liitaa Baadshaho: Sheekada oo loo dhigay hab sahlan sidoo kalena qaybaha dambe dafiic ka ah xiligii la rabay inay xasaasi noqoto.
Daawo Ama Ha Daawanin Baadshaho: waa filim fariintiisa dadka ku cusbeyn madaama fariin dhac keed dahab ku saabsan yahay, hadii aad Action heer sare ah iyo bandhiga Ajay iyo Emraan rabtid waad daawan kartaa laakiin hadii aad sheeko cusub baadi goob ugu jirtay Baadshaho waad iska dhaafi kartaa!
Fariinta Filimka Baadshaho Xambaarsan Yahay: Sanadii 1975 dowlada Hindiya waxay ku dhawaaday in dalka galay xaalad deg deg ah ama kala guur ah sidoo kalena dowlada waxay bartilmaameed ka dhigatay inay la wareegto boqorada gobolada kala duwan ka taliyaan hantida ma guurtada ah oo ay heestan haba ugu badnaado keedka dahabka ah.
Gitanjali (Ileana D’Cruz) oo ah boqorad Rajhasthan ka taliso waxaa xireyso dowlada Hindiya sidoo kalena keedkii dahabkeedii faraha badnaa waxaa si awood ku dheehan kala wareegeyso dowlada Hindiya.
Gitanjali (Ileana D’Cruz) qasrigeeda wax walbo oo yaalay waa laga qaadanaa waxna kama qaban karto hantideedana oo dahab u badan waxaa loo raraa Delhi in la geeyo oo ah xarunya xukuumada Hindiya.
Gitanjali (Ileana D’Cruz) waxay u tagee ilaaliyaheeda gaarka ah sidoo kalena ay aad u jeceshahay Bhawani Singh (Ajay Devgn) kaasi oo ay ka codsaneyso inuu ka hor istaago dowlada in dahabkeeda la geeyo Delhi.
Bhawani Singh (Ajay Devgn) waa hogaamiye awood badan arin kastana xalkeeda keeni karo sidaa darteed wuxuu sameesanaa koox karti badan oo isaga hawl galkaan kala qayb qaadato si ay dowlada dahabka kaga soo dhacaan.
Bhawani Singh (Ajay Devgn) kooxda uu sameestay waxaa ka mid ah ninka qamri cabka badan laakiin kartidiisa aan loo dhawaan karin Daliya (Emraan Hashmi), farsamada yaqaanka qasnadaha jebiyo Guruji (Sanjay Mishra) iyo gabadha soo jiidashada badan ee raga dhagarto daacadna u ah boqortooyada laguna magacaabo Sanjana (Esha Gupta).
Kooxdan dheeli tiran waxay heestaan 96-saacadood inay ka hortagaan in dahabka Delhi la geynin sidoo kalena halis walbo ka bad baadaan, laakiin Mission-kooda ama qorshahooda waxaa hortaagan sarkaalka dahabka masuulka ka ah in Delhi la geeyo Major Seher Singh (Vidyut Jammwal) waana nin awood badan.
Hadaba 96-saacadood hawl gal qaadanayo iyo safaro masaafo ahaan ah 600km maku guuleesan doonaan Bhawani Singh (Ajay Devgn) oo hortaagan askariga aan la dhagri karin Major Seher Singh (Vidyut Jammwal) ?
Maxaa Laga Yiri Sheekada Filimka Baadshado: Director Milan Lutharia si qurux badan ayuu Baadshaho u diyaariyay door walbo sidoo kalena halka saac ee hore adigoo u baahan ayaa dhex taalka la aadaa.
Action-ka, dhaca, qayaanada iyo hadalada jilaa walbo ku hadlaayo ayaa si heer sare ah loo diyaariyay kuguna qasbaayo inaa Baadshaho ku cesh ceshatay.
Filimka Baadshaho labo dhacdo lagama libirsan karo:
Mida kowaad isbursiga Emraan Hashmi iyo Vidyut Jamwal oo si aan caadi ahayn loo sameeyay waana dhacdo xasaasi ah.
Mida labaad kooxda xeelada badan sida ay dahabka kaga xadayaan baabuurka uu saaran yahay waa muuqaalka ugu xiisaha badan filimkaan!
Qaybaha dambe ayuu xoogaa Baadshaho caajis leeyahay waxaana la rabay Director Milan Lutharia inuu sheekada ku waday sidii halka saac ee hore laakiin qaybtaan waxaa u ceeb qarinayaan bandhiga jilaayaasha oo aan caadi ahayn.
Bandhiga Jilaayaasha Filimka Baadshaho: Ajay Devgn wuu soo laabtay wuxuuna la yimid bandhig cajiib badan hadii aadan dhawaanahan Devgn u sacaba tumin markaan sacabkaaga diyaarso!
Ajay Devgn waa hogaamiye dhab ah aadna ugu haboon filimada fariintaan oo kale xambaarsan wuxuuna noqday Baadshaho filim Devgn ku haboon awoodiisa qaab jiliin ahaaneed.
Emraan Heshmi inaba caadi ma ahan waayo marnaba lama fileyn cadka libaaxa ee Ajay Devgn la siiyay inuu la qeebsanayo wuxuuna xidigaan ku amaanan yahay sida heerka sare uu filimkaan u matalay iyo sida uu Devgn garab garabka ula simay asigoo caawiye ka ah filimkaan.
Ileana D’Cruz waa qofka loo daawanayo halka saac ee hore filimkaan hubanti ahaan xidigtaan waqti ku filan ayaa laga siiyay Baadshaho iyadana doorkeeda siweyn ayay ugu cadaalad fashay kama liidato ragga awood badan ee filimkaan la isugu keenay.
Esha Gupta wey soo jiidasho badan tahay weyna isku kalsoon tahay laakiin waxaa nasiib daro ah doorkeeda ma qayaxno cida ay la jirto iyo sababta ay hawl galka halista ah ugu jirto, iyadaa ugu liidato dhamaan jilaayaasha filimkaan!
Vidyut Jammwal door karti badan ayuu qaatay aadna loogu amaani karo marwalbana wiilkaan doorkiisa ma xumaado ha yaraado ama ha weynaado laakiin Baadshaho isaga kursiga gadaale ayuu fadhiisanaa bandhig ahaan madaama Emraan iyo Ajay kaga awood badan yihiin.
La yaab ayay noqotay in Sanjay Mishra uu noqday midka ugu bandhiga wanaagsan dhamaan jilaayaasha filimkaan la isugu keenay waayo door wacan iyo hadalada ugu tayada badan filimkaan isaga ayaa la siiyay waana arin lama filaan ah!
Priyanshu Chatterjee doorkiisa madaxnimo ee hogaanka dowlada Hindiya laakiin ma ahan door adag oo awood badan sidaa darteed waa boos buuxis oo aan nuxur laheyn.
Sunny Leone muuqaalkeeda heesta Piya More oo ay Emraan Hashmi la wadaagtay waa muuqaal kulul oo dhalinta si gaar ah usoo jiidanayo.
Gunaanad: Baadshaho waa si wacan loo daawan karo kaasi oo leh Action, dhac, qayaano iyo hadalo heer sare ah sidoo kalena jilaayaasha bandhig weyn la imaadeen.
Baadshaho malahan sheeko ama fariin cusub laakiin wuxuu xambaarsan yahay fariin horey loo arkay oo si heer sare ah loo jilay sidaa dareed kuwa filimada ka faaloodaan cel celis ahaan waxay siiyeen 3.5/5 taasi oo ka dhigay in Baadshaho fariintiisa wacan tahay daawashadiisana lagu qasaari doonin.
Dhanka Boxoffice filimkaan waa hubaal sedexda maalmood ee hore ganacsi adag sameyn doono madaama maal maha ciida lagu jiro sidoo kalena ganacsigiisa heerka uu gaari doono waxay ku xirnaan doonaa maal maha shaqada sida uu isku celiyo.
Baadshaho halka walaac ee laga qabo waa filim loogu tala galay dadka dabaqada dhexe iyo hoose ee u daawasho tagaan Single Screens ee Action-ka jecel balse hadii sheekadiisa soo jiidato dadka dabaqada sare ee u daawasho tagaan tiyaatarada daqli badan Multiplex filimkaan soo jiito waa hubaal inuu guul weyn gaari doono.